4 vanhu vakaurayiwa muCzech Republic neFrance kuparara kwendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » 4 vanhu vakaurayiwa muCzech Republic neFrance kuparara kwendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Czechia Breaking News • France Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Pakutanga pazuva rimwe chetero, ndege ine injini ine mwenje yakarovera mumugwagwa mukuru kuchamhembe kweFrance dunhu reVoignarou, ichiuraya vanhu vaviri vaive muchikepe.
Ndege yemagetsi-injini yadonha muCzech Republic nhasi.
Vanhu vaviri vaive mundege vakafa mutsaona.
Vanhu vaviri vakauraiwawo mutsaona yendege muFrance
Vanhu vaviri vakaurayiwa mutsaona yendege yemagetsi-injini padyo netaundi reKladno padyo nePrague mu Czech Republic.
Tsaona iyi yakataurwa nemugovera, Gunyana 4, nemumiriri wemapurisa eCzech Lucia Novotna.
"Vanhu vaviri vakafa mutsaona yendege yendege yemitambo padyo netaundi reKladno," akadaro mupurisa.
Tsaona yakaitika chinguva chidiki mushure me14: 00 (2pm) Central Europe Nguva.
Mapurisa eCzech pari zvino ari kuongorora izvo zvakakonzera chiitiko ichi.
Pakutanga pazuva rimwe chetero, ndege ine injini ine mwenje yakarovera mumugwagwa mukuru kuchamhembe kweFrance dunhu reVoignarou. Vanhu vaviri vakauraiwawo mutsaona iyoyo.